LED Gadheni chiedza 80w Gadheni Mwenje Park Gadheni Mwenje
【ITSVA DESIGN】 Chiedza chebindu chichangobva kutangwa.Kutaridzika kwayo kwakanaka kunodiwa nevatengi.
【HUNHU HWAKANAKA】 Chiedza chebindu chine yemhando yepamusoro die cast aluminium pekugara uye PC inopararira.
【KUNYANYA KWAKURU】 Yakasarudzwa yemhando yepamusoro LED machipisi.Kubudirira kwepamusoro 3030/5050 leds.CRI>80.
【MOTION SENSOR UYE KUDONGORA MWERE】Unogona kushandisa mwenje mwenje, seNEMA, ZHAGA, ESAVE.Pane nzvimbo yakakwana ye phoyocell.
【IP66 WATERPROOF】 Chiedza chemumugwagwa chine IP66 chekusapinda mvura nemheni, zvichiita kuti ikwanise kumira kwakasiyana siyana kwekunze kwekunze uye mamiriro ekunze.Kushanda tembiricha: -40 ~ 60 ℃.
Kunze kwe LED Luminaria Fixture Aluminium Housing Kunze IP65 Mvura Isingapindiki Led Garden Chiedza
1.Luminaire inowanikwa kubva ku20-90W.Chitaera chitsva chine mukurumbira pasi rese.
2.Excellent kupisa mwaranzi, optical uye magetsi kugona.
3.Die-cast aluminium body ine powder-coating uye anti-corrosion treatment.
4.Ma LED anogona kuiswa kumusoro kana pasi.Kana yakaiswa pazasi, isu tinoshandisa COB chips.
5.3 gore kana 5 gore kana 7 gore garandi.
6.Shandisa hukuru hwepamusoro uye hupenyu hurefu lumileds.
7.International renown brand drivers varipo.
LED aluminium post 75w 90w Post Pamusoro Led Garden Chiedza
1.Iri mwenje webindu re LED rine ma modules e LED.Inogona kuisirwa max matatu led module, ichiita iyi mwenje wemugwagwa uwedzere kuita 180w.
2. Mwenje webindu wakashongedzerwa nemhando yepamusoro yealuminium imba ine IP65 IK08 kukosha uye inovimbisa kuti iyi LED gadheni rambi rakakodzera kushandiswa kwekunze.Yakanakira nzvimbo dzekupaka, zvivakwa uye zvakare kune zvakajairika mwenje wekunze.
3. Mwenje webindu wakatungamirirwa ndeye classic style.Uye kusvika ikozvino, rudzi urwu runogamuchirwa pasi rose.Unogona kuvaona mumigwagwa yenyika dzakawanda.Gore rega rega, huwandu hwedu hwekutengesa kunze kwemwenje uyu hunogona kusvika makumi ezviuru.
4. Iine saizi mbiri dzekunongedza.
5. Pamusana pekupa kwemavara epamusoro kwechiedza CRI> 70, zvinhu zvakavhenekerwa zvinotarisa zvakasikwa!Simba re> 0.9 rinoita kuti zvikwanisike kuti nhamba huru yemarambi egadheni iiswe pane rimwe boka.Iri rambi rebindu re LED rine girazi rekuchengetedza uye rinoshanda zvakanaka patembiricha ye -40 ° C kusvika 60 ° C.
High Quality Aluminium IP66 Kunze Park Lantern 60W LED Post Pamusoro Bindu Chiedza
1.Iri mwenje webindu re LED rakagadzirirwa neazvino Lumileds SMD LEDs.Inogona kuisirwa imwe kana maviri led module, zvichiita kuti mwenje uyu wemumugwagwa ushande avhareji kupfuura 120lm/w.
2. Mwenje webindu wakashongedzerwa nemhando yepamusoro yealuminium imba ine IP66 IK09 kukosha uye inovimbisa kuti iyi LED gadheni rambi yakakodzera kune kunze kwekushandisa.Yakanakira nzvimbo dzekupaka, zvivakwa uye zvakare kune zvakajairika mwenje wekunze.
3. Mwenje webindu inotungamirirwa ndeye european classic style.Uye kusvika ikozvino, rudzi urwu runogamuchirwa pasi rose.Unogona kuvaona mumigwagwa yenyika dzakawanda.Gore rega rega, huwandu hwedu hwekutengesa kunze kwemwenje uyu hunogona kusvika makumi ezviuru.
4. Nokushandisa tiltable LED street lamp adapter, iyi LED Street mwenje iri nyore kuisa padanda.Iyo ine 2 mhando spigot, iyo inokodzera 76/60mm mapango ekuvhenekesa.Kana kuti inogonawo kugadziriswa pamadziro.Nzvimbo dzakavhenekerwa zvakanaka nechiedza chemasikati.
Yakagadzirirwa Logo Kunze kwe LED Gadheni Chiedza
Luminaire inowanikwa kubva ku30-100W.Icho chigadzirwa chichangobva kutangwa, chine nzira mbiri dzekuisa.
Makore mashanu Warranty Kufa Kukandira Aluminium 40W Gadheni Rambi Rambi Chiedza Chiedza cheGadheni Mwenje
【NEW DESIGN】Chiedza chebindu chichangobva kutangwa chigadzirwa.Kutaridzika kwayo kwakanaka kunodiwa nevatengi.
【HUNHU HWAKANAKA】Chiedza chebindu chakashongedzerwa nemhando yepamusoro die cast aluminium dzimba uye PC inopararira.
【KUSHANDA KWAKURU】Yakasarudzwa yakakwirira mhando LED machipisi.Kubudirira kwepamusoro 3030/5050 leds.CRI>80.
【MOTION SENSOR UYE CHIEDZA KUDZORA】Iwe unogona kushandisa mwenje controller, seNEMA, ZHAGA, ESAVE.Pane nzvimbo yakakwana ye phoyocell.
【IP66 CHISIRO CHEMVURA】Chiedza chemugwagwa chine IP66 yehumbowo hwemvura uye mheni, ichiigonesa kutsungirira kwakasiyana siyana kwekunze nharaunda nemamiriro ekunze.Kushanda tembiricha: -40 ~ 60 ℃.
【ZVINYORE KUISA】Gadzirisa nemabhaudhi mashoma uye akareba kuti aite kuti agare akasimba pamatanda emwenje.